कहिले तपाइँ तपाइँको लोगो पुनः डिजाइन गर्नु पर्छ? | Martech Zone
बिहीबार, जुन 25, 2015 बिहीबार, जुन 25, 2015 Douglas Karr
बाट टोली खाली डिजाइनहरू लोगो पुन: डिजाइन, तपाईंलाई किन पुन: डिज़ाइन गर्नु पर्छ किन कारणहरू, के गर्नु पर्छ र पुन: डिजाइनको नगर्नु, केही लोगोलाई पुन: डिजाइन गल्तीहरू, र केही उद्योग विशेषज्ञहरूको प्रतिक्रियाको बारेमा केहि विचारहरूको साथ यो सुन्दर इन्फोग्राफिक प्रकाशित गरेको छ।
तीन चार कारणहरू तपाईंको लोगो पुनः डिजाइन गर्नुहोस्
कम्पनी मर्जर - मर्जरहरू, अधिग्रहणहरू, वा कम्पनी स्पिन-अफहरूलाई प्राय: नयाँ कम्पनीको प्रतीकको लागि नयाँ लोगो आवश्यक पर्दछ।
कम्पनीले यसको मूल पहिचान पछाडि बढेको छ - यस्तो कम्पनीको लागि जुन आफ्नो प्रस्ताव विस्तार गर्दै छ, जस्तै नयाँ उत्पादनहरू, सेवाहरू, इत्यादि परिचय दिदै।
कम्पनी पुनरुद्धार - कम्पनीहरु जो धेरै लामो समय लाग्यो र एउटा लोगोको आवश्यक पर्दछ।
म अर्को कारण थप्न चाहन्छु! मोबाइल दृश्यहरु र उच्च परिभाषा डिजिटल स्क्रीनहरु बिल्कुल परिवर्तन भयो कि तपाइँको लोगो कसरी हेरिन्छ। तपाईंको लोगो फ्याक्स मशीनमा कालो र सेतो राम्रो देखिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नका दिनहरू भयो।
आजकल, एक भएको फ्याफिकन आवश्यक छ तर १p पिक्सेलमा १ p पिक्सेलमा मात्र हेर्न सकिन्छ ... राम्रो देखिन असम्भव। र यो सबै बाटोमा जान सक्दछ एक छविमा प्रति इञ्च २२ ret पिक्सेलमा रेटिना डिस्प्लेमा। यसलाई सहि बनाउनको लागि केहि राम्रा डिजाईन कामको आवश्यक पर्दछ। उच्च परिभाषा स्क्रीनहरूको फाइदा लिनु एक मान्य कारण हो, मेरो रायमा नयाँ लोगो विकसित गर्नका लागि!
यदि तपाईंले विगत केही बर्षहरूमा आफ्नो लोगो पुनः डिजाइन गर्नुभएको छैन भने, तपाईंको लोगो अनलाइन अनुसन्धान गरिरहेका जो कोहीलाई उमेर देखिन्छ (जुन सबैको बारेमा हो!)।
टैग: स्पष्ट दृश्यलोगो इन्फोग्राफिकलोगो पुनः डिजाइनलोगो पुनः डिजाइन इन्फोग्राफिकपुन: प्रयोग गर्नुहोस्